Fampakaram-bady ririnina - hevitra ho an'ny sary fitifirana
Satria tsy misy sakana ho an'ny fo roa feno fitiavana, toy izany ny ririnina - tsy fialan-tsiny handà ny fampakaram-bady sary fivoriana. Mifanohitra amin'izany, ny lanezy marevaka, ny lolo fotsy ary ny hazavana manjelanjelatra eo amin'ny takolaka dia mety hiditra tsara ao.
Ny fampakaram-bady amin'ny ririnina dia hanome hevitra be dia be sy sary vetaveta, ary ny sary vokatra dia ho lasa ny tena fototry ny rakikiram-pianakaviana ary mandritra ny taona maro dia hampahatsiahy anao ny hetsika mahafinaritra sy mahafinaritra.
Sary fampakaram-bady sary fampakaram-bady: hevitra sy toro- hevitra momba ny fampakaram-bady
Ny fiomanana amin'ny fampakaram-bady sary fitifirana dia tsy mora, indrindra raha ny fampakaram-bady no tokony hatao mandritra ny ririnina. Noho izany, tsara kokoa ny mitodika any amin'ny mpiasa matotra. Miankina amin'ny toetry ny toetrandro, ny temperam-pon'ireo mpivady vao sy ny faniriany manokana, ny mpaka sary dia hifidy ny sehatra tsara indrindra, mitazona fampahafantarana sy hikarakara ny tontolo iainana.
Raha ny tena izy, amin'ny ankapobeny, olona manana tetikasa matihanina amin'ny fakàna sary, manana traikefa manan-karena sy saina. Ohatra, afaka manolotra ny tompony:
Fiarandalamby, satria ny sary amin'ny soavaly dia safidy mandresy. Ary mijery tsara tarehy izy ireo, na izany aza, raha hankany amin'ny toeram-piompiana tsy lavitra azy ireo mpivady vao, na handeha amin'ny trozona Rosiana nentim-paharazana.
Tara-pahavitrihana tsy ampoizina, dia afaka manamboatra ny sora-tanana amin'ny sary fampakaram-bady. Feno fankahalana ny mpankafy manoloana ny lozam-pandrefesana amin'ny lolo mena - ho an'ny mpiasa toy izany dia azo atao ny miala amin'ny drafitra efa novolavolaina.
Mba hahatonga ireo sary ho maotina kokoa dia matetika ny mpaka sary dia manoro ny mpivady vao mameno ny sarin'ny tsirairay miaraka amin'ny fitaovana mamiratra. Ny mofomamy, ny hatsikana ary ny matevina amin'ny alokaloka matevina dia manohitra ny lozam-pifamoivoizana iray monotone, vokatr'izany, ireo sary dia mahafinaritra sy mahavariana.
Izy io dia mifanaraka tanteraka amin'ny fampakaram-bady marika. Ao anatin'izany dia afaka mandondona ny tenanao ianao, miala amin'ny hatsiaka, na afaka mametraka eo amin'ny lembalemba misy ala ianao mba hisotroana dite mafana. Na izany na tsy izany, ity zavatra kely ity dia tena ilaina ho an'ny mandeha amin'ny ririnina.
Na dia mahavariana tokoa aza ny fizotran'ny fitifirana, saingy rehefa misy "mince mendrika" eny an-dalambe, dia ny fisaintsainana ny fomba hahatongavana haingam-piasa mafana dia lasa manindry kokoa. Ny fahafahana lehibe hampifandraisana ny raharaham-barotra amin'ny fahafinaretana dia ny mijery any amin'ny cafe na trano fandraisam-bahiny. Eto ianao dia tsy afaka miala sasatra, fa manohy ny fotoam-pivoriana. Raha eny, ny hevitra miaraka amin'ny trano fisakafoanana, trano fisotroana kafe iray na trano iray manana trano tsara tarehy dia azo antoka fa hitarika ireo mpivady izay tsy tia miankina amin'ny toe-javatra. Satria ny hainandro amin'ny ririnina ihany koa dia henjana, toy ny orana sy ny orana mivaivay - tsy afaka ny ho gaga tanteraka amin'ny andro manan-danja toy izany. Ny fitifirana ao amin'ny efitrano dia hamonjy ny mpivady vao avy amin'ny traikefa maro, ny orona mena ary ny tongotra mangatsiaka.
Mazava ho azy, misy hevitra maro ho an'ny sary fampakarambady sary, saingy raha ny fampakaram-bady no mitranga amin'ny ririnina, tsy izy rehetra ireo dia mora azo. Tsy maintsy dinihantsika ny toetry ny toetr'andro sy ny fahafaha-manaon'ny olombelona.
Fitafy lava amin'ny fomba grika
Fotoam-pivorian'ny fotoam-pianarana "Miala amin'ny hopitaly"
Amin'ny akanjo hanaovana akanjo lava mahazatra - tsipika malefaka misy karazany maro
Inona no atao eny amoron-dranomasina?
Karazana tarehimarika - ahoana no hanasongadinana ny hatsaran-toetra?
Ahoana no fomba fitafy ho amin'ny fandevenana?
Amin'ny inona ny fanao amin'ny boots ny vehivavy amin'ny ririnina?
Zana-bao tokana monochorionika
Photoshoot ao anaty rano
Navoaka tamin'ny vehivavy ny vehivavy
Fanamboarana milina fanatsarana
Ahoana ny fandehanana efitrano tsy misy toeram-pisakafoanana?
Ahoana no handoavana ny lanjany ao amin'ny tovovavy fanatanjahan-tena?
Yohimbine ho an'ny fahavoazana mavesatra
Iza amin'ireo akondro ireo no ilaina, maitso na mavo?
Nisy ankizy nitelina taolam-paty
Ny tifitra Grammy mampihetsi-po indrindra: Justin Bieber sy Jackson Bieber
Ahoana ny fandondonana haingana ny hafanana amin'ny zaza?
Nahoana ianao no tsy afaka mijery ny varavarankely amin'ny alina?
Kely amin'ny tongotra eo akaikin'ny ankihibe
Staphylococcus aureus - soritr'aretina